जिउ असला माछाको भुँडी झै टलक्क टल्किएका थियो - Wonder Ideas
जिउ असला माछाको भुँडी झै टलक्क टल्किएका थियो
यो वैश बडो अचम्मको … खपीनसक्नुको थामीनसक्नुको । आए पछी रोक्न नसकिने सार्न नसकिने सायद त्यही भएर होला बुढापाकाहरुले यसलाई मिलाएर उखान बनाएका छन नि ”खान जाने वैश खान नजाने खाईस्,, । पाठक मित्रहरु ! यही वैशसँग सम्बन्धित भएर लत्पतिएको मेरो जिन्दगीको एउटा घुम्तीलाई तपाईहरुमाझ प्रस्ट्याउन गईरहेकोछु। जतिबेला मेरो उमेर १८/१९ को थियो । शारीरिक विकाससँगै
म आफु जवान भएको महसुस म आफैले गर्न थालीसकेको थिए। मलाई जहिले पनि यौन सम्पर्क मात्र गर्न मन लाग्न थालेको थियो । गाउँघरका केटी र आईमाईहरुको ठुला -ठुला दुधका फाँचा र चाक देख्दा बिजुलीको भरमा लाडो ठनक्क ठनक्क ठन्कन थालेको थियो। म एकहोरो नै भएर हेर्ने गर्थे ती फाँचा र त्यो बीचको खोल्सोहरु ….. यसरी हेर्दा मैले एकाध सुस्मिता भाउजु र काकी तथा अन्य केटीहरुबाट गाली पनि नपाएको हैन । तर म पनि के कम , छुनु पो पाप हो त हेर्नलाई त के को पाप ? तिमीहरु पनि त टाईट कपडा लगाउदै फुत्केला जस्तै गरी देखाउछौ त छोपेर राख न त भन्थे । म ती फाँचाहरु र चाकहरु सम्झदै छोल्दै बस्थे मैले अन्तरी , गोरी , निर्मला तथा अन्य आईमाईहरुको मोटो पुती सम्झदै कति छोले कति यसको हिसाब किताब नै छैन मेरो लाडो खेलाउदा खेलाउदा ठुलो भैसकेको थियो ।
समय चैत्र महिनाको थियो । म गाउँ डुलेर फर्कदै थिए बीच बाटोमा एकान्त घर थियो जहाँ निराजनत उनको घरजहान सुस्मिता भाउजु मात्र बस्थे । जुनेली रातमा टाढाबाट हेर्दा सुस्मिता भाउजु को घरमा केही राखे जस्तो देखिन्थ्यो मैले सोचे निराजन मधेस जानु भएकोले गर्दा सुस्मिता भाउजु ले बिस्कुन पनि उठाउनु भएनछ । तर जब म नजिक आईपुगे वास्तविकता आकाशपातलको फरक थियो।त्यहाँ पाण्डितनी सुस्मिता भाउजु पो बाहिर टाँडमा ओछ्यान हालेर सुत्नु भको रहेछ । समय रातको १०/११ बजेको हुदो हो। चैत्रको गर्मीमा भए भरको कपडा खोलेर आफ्नो पुतीलाई हावा ख्वाईराख्नु भएकोल रहेछ जुनेली रातमा ती सुस्मिता भाउजु को तिघ्रा र जिउ असला माछाको भुँडी झै टलक्क टल्किएका थियो। म बिस्तारै – बिस्तारै उनी सुतेको टाँडको
माथिल्लो गह्रामा गएर उनको रहरलाग्दो शरीर हेर्न थाले। गोरो शरीर ठीक्कको सुहाउदो जिउडाल त्यही माथि त्यो पुर्णिमाको जुनाको प्रकाशमा उनको शरीर…..! सम्झदै त भुतुक्कै हुने म आईमाईको नाङगो शरीर देख्दा त झन लाडोले डिग्री नाघीसकेको थियो । मेरो लाडोमा चिपचिप पानी आउन थालेको थियो। माथिल्लो गह्राको डिलबाट सुस्मिता सुस्मिता भाउजु को शरीर खुब नियालेर हेरे ।बिहे गरेको ४ बर्ष भै सक्दा पनि उनीहरुको कुनै जन्म भएको थिएन। त्यसैले होला उनको शरीर हेर्न लायकको नै थियो। सुस्मिता भाउजु ले माथि ब्रा मात्र लाएकी रहेछिन।तल भने पेटीकोट पेटीकोट सुर्केर कम्मरमा बाटरिएको थियो। । उनी चैत्र मासको गर्मीले होला घरी यता फर्किन्थिन घरी उता फर्किन्थिन घरी घोप्टो पर्थिन मलाई भने उनी उत्तानो परेर सुती दिए धित मरुञ्जेल हेर्थे भन्ने चाहना हुन्थ्यो ।
मैले उनको यो कृयाकलाप हेरेको लगभग १ घण्टा जती भै सकेको थियो। उनलाई निद्रा लागेछ क्यार अन्त्यमा मेरो रुची अनुसार नै उत्तानो परेर सुती । मैले पनि बडो मज्जाले हेर्दै मेरो फलाम झै कडा बनेको मेरो लाडो बिस्तारै बाहिर निकालेर सुर्क्याउन थाले। स्त्री लम्पट बनेको यो मनले सुस्मिता सुस्मिता भाउजु को त्यो सेतो तिघ्राबीचको प्रष्ट नदेखिने ठाउँको कल्पना गर्दै ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात पारे अन्त्यमा मेरो लाडोले फुसी पिच्च पिच्च गर्दै झार्यो। मलाई अली सञ्च भयो म त्यही उत्तानो परेर १५/२० मिनेट बिताए । मलाई ती सुस्मिता सुस्मिता भाउजु को नाङ्गो शरीर हेरेर चित्त बुझेको थिएन । फेरी जुनको प्रकाशमा उनको ब्राले छोपेका दुधका फाँचा र सेता सेता पिडुँलाहरु हेर्न थालेको मात्र के थिए मेरो लाडो फेरो सनक्क भएर उठिहाल्यो । अब मन हेरेर मात्र चित्त बुझाउने पक्षमा
थिएन । आफैलै सम्हाल्ने प्रयास गर्न खोजे पनि मन बन्दै मानेन । म बिरालोको चालमा उनको घर झरे । मलाई बासनाले मेरो समाज सम्बन्ध र इज्यात सबै बिर्सिसकेको थियो । मेरो मुटु जोड जोडले धड्कीरहेको थियो । राम्रै फकाउने नत्र जबर्जस्ती भए पनि नचिकी नछाड्ने मनमा भुत सवार भईसकेको थियो। म बिस्तारै – बिस्तारै उनी सुतेको टाँडमा पुगे । उनी निदाईरहेकी थिईन । मेरो शरीर भय र बासनाले तातेर पसिना पसिना भईसकेको थियो । म लुसुक्क उनको ओछ्यानमा पसेर उनको फाँचामा हात पुर्याएर माड्न थाले । उनी पनि कसैले दाना मसारी दिदा बिउँझी निस्किईन त्यस बेला सम्म जुनालाई बादलले छोपी सकेको थियो। तपाई आउनु भो? उनको प्रश्न थियो ।
अँ मैले पनि छोटो उत्तर दिए। उनलाई मेरो स्वारले पती होइन भन्ने हेक्का भएछ क्यार बिस्तारै हात सिरानीतिर लगिन सायद लाईट बाल्नलाई होला म पनि के कम उनको हात च्याप्प समाती दिए बडो प्यारले । तपाई को हो ?भन्दै पन्छिन खोजिन अब मैले लुकाउनु पर्ने कुरा थिएन । सुस्मिता भाउजु म कमल । मैले तपाई सुत्नु भको २ घण्टा अगाडि देखी हेरिरहेको छु । १ पटक त तपाईंको तिघ्रा तपाईको दुधको फाँचा र तपाईंको पुती हेर्दै र सम्झदै छोलेर फाले तर पनि सञ्च भएन । अन्त्यमा चिक्ने नै मनसाय लिएर यहाँ आएको सुस्मिता भाउजु , प्लिज मलाई एकपटक चिक्न दिनुस् न । धर्म नै हुन्छ सुस्मिता भाउजु ! मैले एकै सासमा यती भनी सिध्याए । धत कमल भाई हुँदैन तपाईको दाइको मात्र पत्नी हुँ म अरुसँग यस्तो काम गर्न सक्दिन । छोड्नुस् मलाई भन्दै उठ्न खोजिन । मैले उनलाई उठ्न नदिई बिस्तारी लडाउदै सम्झाए सुस्मिता भाउजु
प्लिज म त पागल नै भईसके। तपाई नै किन यस्तो बाहिर जुनेली रातमा नाङ्गो सुती दिनु भो त ? तपाईले दिनु हुन्न भने पनि म त जबर्जस्ती भए पनि गर्छु । भन्दै उ माथि चढेर उनको गाला ओठ घाँटी जताततै चुम्बन गर्दै उनको गतिलो गतिलो फाँचालाई माड्न थाले। उनका फाँचाहरु पनि कमका हैनन् हातले भ्याउनै मुस्कील । उनी भने उम्कने प्रयास गर्दै थिईन कमल भाई तुरुन्त मलाई छाड नत्र म चिच्याउछु । मैले पनि जो गर्नु हुन्छ गर्नुस् हल्ला गर्नुस् चिच्याउनुस् मलाई कुट्नुस् तर म अन्धो भईसकेको छु । भरे कोही आईगए उनले नै मलाई बोलाको हो भनिदिन्छु । मेरो त के २/४ दिन कुरा काट्लान तर बर्बाद त तपाईंको नै त हुन्छ नि हैन? सुस्मिता भाउजु चुप भई तर पनि फुत्किने प्रयास भने जारी नै राखिन ।
छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको बल कहाँ मिल्छ र मैले जे चाह्यो उही हुँदै थियो त्यहाँ मेरो लाठे बलको अगाडि उनी निरिह बन्दै थिईन उनी । म उनको हात र खुट्टाको चलमालसँगै पनि उनको ठुला ठुला दुधका फाँचाहरु माड्दै उ माथि चढेर जता पायो उतै चुम्बन दिदै थिए । मेरा हातहरु उनका स्तान घाँटी ढाड पेट तथा चाक तिर जहाँ पनि पुग्थे । यसो हुँदा हुँदै अब मेरो हात उनको कम्मर मुनी खेल्न थालीसकेको थियो । त्यसबेला सम्म त उनी पनि पग्ली सकेछिन कि क्या हो उनले मलाई उनको मेरो हात र ओठ लाई अवरोध गर्न छाडी सकेकी थिईन । मेरो लाडोले उनको पुती माथि लाभ्रे टाँसिए झै टाँसिरहेको थियो। म अलि उत्ताउलो हुँदै सुस्मिता भाउजु को हात मेरो लाडोमा लगेर छुवाईदिए उनी हात झिक्दै मान्दै थिईनन
२/३ पटक कर गरेर खेलाई दिनुस् न सुस्मिता भाउजु भने पछी बल्ल खेलाउन थाल्नु भो। आम्मै कति लामो …… अनायस सुस्मिता भाउजु को मुखबाट यो शब्द फुत्कियो म हाँस्न थाले। के हो निराजनको छोटो छ कि क्या हो ? मेरो जाबो ८ इन्चको त हो नि । तपाईंकोनिराजनका त ४ ईन्च जतिको छोटो मात्र छ भित्रै पुग्दैन खाली बिट बिटमा हिर्काएर छाड्नु हुन्छ सुस्मिता भाउजु अब खुलेर बोल्न थाली सकेकी थिईन । मैले उनको पुतीमा हात पुर्याउदै आज लामो माल चाख्नुस् न सुस्मिता भाउजु भने ओहो उनको पुतीबाट पानी झरेर पेन्टी नै भिजी सकेको रहेछ र्याल र्याल भएको पेन्टी फुकाल्दै सोधे के सारो पानी फालेको ? आको पानीलाई के गर्नु त नि उनीले पनि उल्टै मलाई प्रश्न तेर्स्याईन। उनले पनि तपाईको माल छाम्दै म कस्तो भैसके अनि पानी नझरेर के झर्छ त ?
बरु छिटो पो घुसार्नुस् भन्दै मेरो पेटी हतार हतार फुकालेर हाल्फ पेन्ट र भित्री कट्टु फुकाएर फालिदिईन। मेरो बिचारमा सुस्मिता भाउजु अब खप्नै नसक्ने भईसकेकी थिईन। मैले पनि यही हो बेला भन्दै मेरो लाडोलाई सुस्मिता भाउजु को पुतीको टाउकोमा राखे अनि कानमा खुसुक्क भने सुस्मिता भाउजु मिलाउनुस् न। हो मैले थापी पनि दिनु अझ घुसार्नलाई सिधा परेर मिलाउनु पनि …? भो म त मिलाउदिन आँफै मिलाएर पसाउनु है भन्दै सजिलो गरेर खुट्टा फटाईदिईन मैले पनि किन नामर्दा हुनु भनेर लाडो अलि तल झारेर बिस्तारै ठेले अलि अलि गर्दै ह्वात्तै पसाई दिएको सुस्मिता भाउजु त अत्तालिए झै पो हुनु भो के भयो नि किन लामो सास फेरेको भन्दै मैले सोधे अँ मुटु सम्म पुग्ने गरी ठेलेको छ अनि किन अत्तालिएको रे ? मुटु
सम्म त गफ नै भो मेरो नाइटो सिधा भने पक्कै आईपुग्यो। मेरो पाठेघर नै छेडी दिन्छौ जस्तो लाइरा छ लामो भनेको लामो नै हुनेरैछ दाजैले त बिट बिट हिर्काउदै बस्थे भन्दै मलाई कम्मरमा अझ कसिन । मैले दनदन चिक्न थाले त्यो समय …. मैले मेरो समाज र सम्बन्धलाई बिर्सिदिए उनले पनिमेरो सिउँदो र कौमार्य पण्डितको मात्र हो भन्ने कुरा भुलीदिई । म तातो तातो पुतीमा चिप्लो चिप्लो पानीसँगै ग्वाम ग्वाम चिकीरहेको थिए। सुस्मिता भाउजु मेरो कम्मरमा र मेरो शरीर मसार्दै र अंगालो मार्दै मलाई कस्दै आँखा चिम्मा गरिरहेकी थिईन। मैले पहिला नै छोली सकेकोले मेरो फुसी अलिक ढिलो झर्ने पक्का थियो। त्यसैले मैले छिटो छिटो मेरो घोचा उनको खौलीमा भसाउन थाले । सुस्मिता भाउजु को सास छिटो छिटो चल्न थाल्यो मैले झन उनलाई असीम आनन्द होस् भनेर झन स्पीड बढाए मेरो चिकाइको गति सँगै आवाज पनि छिटो छिटो आईरहेको थियो किच्चिक किच्चिक किच्चिक किच्चिक किच्चिक किच्चिक किच्चिक किच्चिक…….
मेरो छिटो छिटो चिकाईसँगै सुस्मिता भाउजु को अंगालो पनि झन झन कसिदै थियो। साथै उनले खुट्टा फारेर मलाई सजिलो पनि बनाइ दिदै थिईन। मैले झन लाडोको फेद सम्म नै भसाउथे उनी कुक्रुक्क परेर थापीदिन्थिन। हाम्रा जिब्रोहरु एकाएकामा तनातान हुन्थे तल भने ठेलाठेल । त्यही ठेलाठेलसँगै एकहोरो हाम्रो ठुला ठुला र छोटा सासका आवाज र एकहोरो आवाज आउथ्यो क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच क्वाँच,……. म लगातार उनीमाथी उफ्रिदै थिए उनी पनि स्वार निकाल्दै थिईन अँ अँ उ उ उँ उँ गर्दै मैले लगभग १३ मिनेट जति उनको पुतीमा लाडो चोबाल्दै निकाल्दै गरिरहेको थिए । उनी शिथिल हुँदै जादै
थिईन । यत्तिकैमा मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्न थाल्यो। म एक छिन रोकिए । सुस्मिता भाउजु लाई कानमा सोधे झारिदिम् …..? उनले पनि हुन्छ झार्नुस् भनिन मेरो पाली पहिलाको भन्दा छिटो छिटो र सारो तरिकाले उनको पुतिमा माल भसाउन थाले । उनी पनि मलाई अंगालो कसिलो बनाउदै साथ दिदै थिईन मेरो लाडो फुर्फुराउन थाल्यो । मैले झन भित्र पेल्दै २ हातले सुस्मिता भाउजु को काँध समात्दै आफु तिर ताने । मेरो फुसीहरु फ्यात्त फ्यात्त झर्न थाल्यो। अनायस मुखबाट सुस्मिता भाउजु सुस्मिता भाउजु मेरो सुस्मिता भाउजु को शब्दहरु निस्किए उनले पनि हजुर हजुर भन्दै मलाई साथ दिईन । मैले उनलाई पुतीदेखी भएभरको शक्ती लगाउदै काँध देखी पनि तान्दै कुप्रो पार्दै मेरो फुसीलाई जम्मै भित्र फालिदिए । हामी एक्छिन किस गर्दै टालिरह्यौ । त्यस पछी बिस्तारै छुट्टीयौ । सुस्मिता सुस्मिता भाउजु र मैले त्यो रात ५ पटक चिकामारी खेल्दै रात छर्लङग पार्यौ।
स्कुल नगयर उन्को घर मा आउन भनी बोलाइन
सबै गाउले ले देखच भनेर अर्को ठाउमा जाने कुरा गरिन
उ मख्ख पर्ने शैलीमा भने र उ लाजले रातो भइ